Dowladda Imaaraadka oo dacwad ka gudbisay dowladda Somalia | Arrimaha Bulshada
Home News Dowladda Imaaraadka oo dacwad ka gudbisay dowladda Somalia
Dowladda Imaaraadka oo dacwad ka gudbisay dowladda Somalia
Bulsha:- Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dowlada Isutaga Imaaraadka Carabta ay dacwad adag ka gudbisay Dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Dacwadaan ayaa la sheegay in Dowlada Isutaga Imaaraadka ay u gudbisay Hoggaanka sare ee Jaamacadda Carabta.
Dacwada ay gudbisay Dowlada Imaaraadka ayaa la xaqiijiyay inay ku saleysan tahay Khilaaf Siyaasadeedka ka dhex aloosan labada dal, gaar ahaan lacagta looga qabsaday magaalada Muqdisho.
Dacwada ayaa xoogeeda la sheegay inay tahay mid ay dowlada Imaaraadka kaga dacwooneyso dowlada Somalia, oo ay sheegtay inay ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah ee diblomaasiyadda.
Warqadaha Dacwada Imaaraadka ayaa sidoo kale la sheegay inay qeyb ka tahay in Dowlada Somalia ay caqabad ku tahay heshiisyadii diblomaasiyeed ee labada dhinnac ay galeen, iyo sidoo kale heshiiska dekedda Berbera.
Waxyaabaha ay ka dacwoodeen Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka mid ah lacagtii dhawaan lagu qabtay Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo ay sheegen in aan si wanaagsan loola dhaqmin shaqaalaha diyaarada iyo mas’uuliyiinta Muqdisho ujooga.
Si kastaba ha ahaatee, dacwada ay Imaaraadka u gudbisay Jaamacada Carabta, ayaa kusoo beegmeysa xili dhawaan ay Dowlada Somalia dacwaad ka dhan ah Imaaraadka iyana ay u gudisay Jaamacadda Carabta.